Ama-Toys Okuklonyeliswa Kwezingane Okuhamba Phambili 4 in 1 Playset for Toddlers Play Slides for Kids Indoor and Outdoor Jungle Garden Activity Gym Playground Sets for Backyards for Kids Age 3-5 Manufacturer and Factory | Ukudla
Ukukhipha Amathoyizi Okukhuphuka Wengane Yezingane 4 ku-1 Playset Yezingane Ezidlala Amaslayidi Wezingane Zangaphakathi Nangaphandle Kwezingilazi ZaseJungle Umsebenzi Wendawo Yokudlala Ijimu Yamagceke Ezingane Ezineminyaka Engu-3-5
Pl 4-in-1 Izingane Playset】 Isethi yokudlala engu-4 in-1 inikeza imisebenzi emi-4: isilayidi esibushelelezi, umgibeli ongasheleli, umdlalo oqinile wokuzula, kanye nebhokisi le-basketball, elenzelwe ukusetshenziswa komndeni nokwasekhaya ngaphandle . Zonke izinto zomsebenzi zilinganiswe ngokufanele ezinganeni ezineminyaka engu-3 + ubudala.
Material I-HDPE Material, Safe and Durable】 I-4-in-1 baby freestanding slide playets yenziwa ngezinto ze-HDPE eziqinile nezingenabuthi, isilayidi singathwala isisindo esingu-110 lbs, ngakho-ke kuphephile ukuhambisana nengane yakho ize ibe ukukhula.
Sl Smooth Slide & Design Design】 Izilayidi zezingane zinomthambeka omnene nezinyathelo okulula ukuzikhuphula zinikeza izingane zakho isilayidi esibushelelezi. Isilayidi sonke sixhume ngokushelela ngaphandle kwemiphetho yesikhumba sethenda sezingane.
Isakhiwo Esingunxantathu Esizinzile】 Isakhiwo sonke sesilayidi semoto singunxantathu, okuyisimo esizinzile kunazo zonke sejiyometri, okunikeza ulwazi oluqinile lokuslayida enganeni. Lapho izingane zilayida kusilayidi, amandla adonsela phansi asatshalaliswa ngokulinganayo emhlabathini, ngakho-ke isilayidi sibamba umhlabathi ngokwengeziwe.
【Kulula ukuhlangana nokuhlanzeka】 Awekho amanye amathuluzi adingekayo, umuntu oyedwa angaqeda ukuhlangana ngemizuzu engama-20. Isilayidi sojahidada sizoqiniswa ngamantongomane anesiga ukuvimbela ukukhululeka. Uthuli kunzima ukungcolisa endaweni ebushelelezi futhi ungasula isilayidi ngezingubo ezimanzi ezimanzi.
Amasentimitha angama-40 x 27.1 x 8.4
Izitayela Zokukhuphuka Zengane Yezilayidi ezi-4 kwezingu-1 Zabantwana Abancane Abadlala Amaslayidi Wezingane Zangaphakathi Nangaphandle KweJungle Garden Activity Gym Playground Sets
Isethi yokudlala engu-4-in-1 inikeza imisebenzi emi-4:
umdlalo wokuqina oqinile,
enzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle komndeni nokwasekhaya.
Zonke izinto zomsebenzi zilinganiswe ngokufanele ezinganeni ezineminyaka engu-3 + ubudala.
Umbala: Njengoba kukhonjisiwe
Ubukhulu bomkhiqizo: 71 `` x 17.7 '' x 31.5 '' (L x W x H)
Amandla Esisindo: 110 lbs
Iminyaka efanelekayo: iminyaka engu-1-10 ubudala
Izinyathelo ezilula zokukhuphuka zinikeza izingane zakho isilayidi esibushelelezi. Futhi indawo enwetshiwe inkulu ngokwanele ukukhuphuka nokuslayida.
I-4-in-1 baby freestanding slide playets yenziwa ngezinto ze-HDPE eziqinile nezingenabo ubuthi, isilayidi singathwala isisindo esingu-110 lbs, ngakho-ke kuphephile ukuhambisana nengane yakho ize ikhule.
Isilayidi sezingane sinomthambeka omnene nezinyathelo okulula ukuzikhuphula zinikeza izingane zakho isilayidi esibushelelezi. Isilayidi sonke sixhume ngokushelela ngaphandle kwemiphetho yesikhumba sethenda sezingane.
Langaphambilini I-LBLA 1:16 Imoto elawula kude, i-4WD Fast Racing Rock Climbing Off Road Car, Izipho Zamathoyizi Ezingane Zabafana Amantombazane Umdlalo Wangaphandle Ongaphandle (Okuluhlaza okwesibhakabhaka)
Olandelayo: BeebeeRun 2 In 1 Ukudoba Game for Kids, Ngokhuni Magnetic Ukudoba Amathoyizi Umbala Ukuhlunga Inombolo Ukubala Math Amathoyizi Montessori Education Amathoyizi 3 4 5 Unyaka Amantombazane Old Boys Boys Izingane
Ikati Letende Lesilwane Teepee Indlu Yezilwane ngeCushion
Pet Teepee nge Cushion, Cat & Inja (Puppy) ...
Horse Hopper Pump Ride on Toys Pump Kuhlanganisiwe (B ...
40, Saucer Swing Setha nge 8 Ibhonasi Coloured ...
Itende le-Arkmiido Teepee lezingane ezi-White White Canvas ...
Arkmiido Izingane Musical Mat Electronic Dance Mat ...